Betulinic Acid Cas 472-15-1 Qiimaha, Alaab-qeybiye ka socda Bolise
[Lambarka CAS] 472-15-1
[Foomka Molecular] C30H48O3
[Miisaanka Molecular] 456.71
[Isha Botanical] Betula alba L.
1.Latest cholesterol, Waxqabadka adptogenic iyo tallaalka jirka;
Hawlaha Antioxidant iyo antihypoxic;
3.Hepatoprotective, detoxic, hypolipidemic hawlaha
Waxqabadka anti-bararka iyo xasaasiyadda;
5.Antimutagen iyo waxqabadyada lidka ku ah kansarka;
Waxqabadka 6. Antiviral iyo antituberculous;
8.Dhimista xasaasiyadda insulin-ta;
9. Daaweynta saameynta cilladda dheef-shiid kiimikaadka;
Ku saabsan Betulinic Acid
Betulinic acid waa pritacyclic triterpenoid oo si dabiici ah u dhacda oo leh anti-retroviral, anti-malarial, iyo anti-bararka
guryaha, iyo sidoo kale suurtagal dhowaan la ogaadey inay tahay wakiil ka hortagga kansarka, iyadoo la joojinayo topoisomerase. Waxaa laga helaa qolofta noocyo dhowr ah oo dhir ah, gaar ahaan bj birrk cad (Betula pubescens) oo ay ka hesho magaceeda.Waxaa laga soosaaraa betulin materic ceyriin ah oo isku dhafan kiimiko Betulinic acid waxay leedahay anti-bararka, fayraska, anti-tumor, shaqada cholagogic iyo saameynta ilaalinta beerka. Nooc ka mid ah bayoolajiga, betulinic acid wuxuu leeyahay saameyn daaweyn ah anti-HIV, kansarka iyo unugyada melanoma ee aadanaha iyada oo aan la dilin unugyada caafimaadka qaba. Sida laga soo xigtay cilmibaaristii ugu dambeysay, waxay leedahay saameynta xannibaadda ee cerebroma, neuroectodermal.